FEKERO KIRISMAS-ka LA XIDHIIDHA - Welcome to Somali Believers Fellowship
Waa kuma ciise?
markii su'aashan shakhsi ahaan laguu weydiiyo, tani waa su'aasha ugu muhiimsan ee weligeed la is weydiiyey amma laga jawaabey. kumuu ciise masiix adiga kuu yahay?
FEKERO KIRISMAS-ka LA XIDHIIDHA
Posted by	Abdi Duale on	 Tuesday, 09 December 2014 in Barashada Baybalka (Bible Study)
Waxaa mar kale inagu soo dhow xusidii dhalashadii Sayid Ciise Masiix. Intii aan buuqa, dabaaldegyada, iyo wax iibsiga (shopping) ku mashquuli lahaa, waxaan anigu doortay inaan mar kale si sakhsiyan ah uga fekero macnaha uu wakhtigan muhiimka ahi aniga ii leeyahay. Marka aan qisadii dhalashadii Masiixa ka akhriyo Injiilka sida uu Matayos u qoray 1:18-25, laba odhaahood oo muhiim ah oo aayadahan ku jira ayaan si gaar ah ii taabanaya:
"Waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii Rabbigu kaga dhex hadlay nebiga, isagoo leh, Gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxaa loo bixin doonaa, Cimmaanuu'eel; kan micnihiisu yahay, ILAAH BAA INALA JOOGA." (Matayos 1:22, 23).
1. ILAAH BAA INALA JOOGA: ma dareemeysaa inuu Ilaahay kuu dhow yahay oo kula joogo? Mise meel fog ayaad Isaga ka doondoontaa? Dhalashada Masiixa waxaa la inoogu bishaareeyey inuu Ilaahay ina dhex yimid, oo inoo yeedhayo, oo doonayo inuu xidhiidh shakhsiyan ah inala yeesho. Waad ku farxi lahayd inaad madaxweyne waddan la kulantid, oo saaxiib la noqotid, bal ka waran inuu Ilaaha samada iyo dhulka abuuray uu Isagu yimid, oo ku doondoonayo, si uu xidhiidh SHAKHSIYAN ah kuula yeesho. War maxay taasi barako, wanaag, iyo farxad badan tahay! Ilaahay wuxuu meel kale oo Eraygiisa ah inagu odhanayaa, "Bal eeg, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa; haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa..." (Muujintii 3:20). Ilaahay ayaa albaabka qalbigaaga taagan oo doonaya inuu soo galo si aad cunuggiisa u noqotid! Waa Ilaah jacayl miidhan ah oo doonaya inuusan midkeena lumin iyo inuu midkeen kastaa badbaado.
Odhaahda labaad waxay ku jirtaa aayadda 21-aad: Ilaahay ayaa Yuusuf - ninkii Maryan u doonanayd u sheegaya sababta Ciise u imaanayey:
"...laakiin intuu waxan ka fiirsanayay ayaa malaa'igtii Rabbigu riyo ugu muuqatay, iyadoo leh, Yuusuf ina Daa'uudow, ha ka baqin inaad naagtaada Maryan qaadatid, waayo, waxa ay uuraysatay ayaa Ruuxa Quduuskaa ka yimid. Oo waxay umuli doontaa wiil, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, waayo, DADKIISA AYUU DEMBIYADOODA KA BADBAADIN DOONAA."
2. DADKIISA AYUU DEMBIYADOODA KA BADBAADIN DOONAA: waa sababtan ta uu Ilaahay inoo dhex yimid ee uu doonayo inuu xidhiidh inoola yeesho. Wuxuu doonayaa inuu ADIGA dembiyadaada kaa badbaadiyo. Dembiyadeena ayaa Ilaahay inaga dheereeyey. Si kasta ayaynu samaynay si aynu isugu dayno inaynu ugu muuqano kuwo aan dembi lahayn oo aynu isu tusno inaynu Ilaahay u dhownahay, ama kuwa kale uga dhownahay. Xataa qaarbaa dad kale diley/laayey si ay Ilaahay ugu dhowaadaan! Oo sidaas dembigii usii badsaday.
Ilaahay ayaa inoo yimid si aynu dembiyadeena uga badbaadno. Albaabka qalbigaaga ayuu garaacaya oo leeyahay, 'iga fur wiilkaygiiyow/gabadhaydiiyey'. Uma baahnid inaad allabari qashid, dad laysid, jidhkaaga googoysid, ama aad camallo kale oo is-tus ah samaysid. Dembiyadaada ka toobad keen, oo Ilaahay qalbigaaga ku soo dhowee, oo u noolow sida uu doonayo inaad u noolaato, adigoo taas ka ogaanaya Eraygiisa.
Waxaan Masiixiyiinta Soomaaliyeed ku guubaaniyaa inay wakhtigan si shakhsiyan ah mar kale usu weydiiyaan, Maxay Dhalashada Masiixu aniga iiga dhigan tahay? Soomaalida aan Masiixiyiinta ahayna waxaan u sheegayaa: qalbiyadiina Ilaahay ka fura, oo soo dhoweeya, waxaadna heleysaan nabad, barako iyo farxad joogto ah.
Waxaanu dhammaantiinba idiin rajeyneynaa Ciid wanaagsan, sannadka soo socdana mid barakaysan.
fuaad Thursday, 29 January 2015
Sorry waxanan xusin diintaan haysto waxaan ahey shaqsi somaliya oo Ku dhashey diiinta islamka
Marka hore waan idin salamayaa marka xiga waxaa fikirkeygu yahay dadka somaliyeey waxa ay yihiin 100% Islam balse waxaa zoo ifbaxaaya dad somaliya oo haysta diimo kale lamana yaabani balse diinta aad aminsantihiin hala timaado cadeymo waafiya
Bible	Verse of the Day
Masiixiyiinta Soomaalida iyo Hay'adda Culimada Soomaaliyeed!
"Masiixiyiinta Soomaaliyeed laaya, dila, qoorta ka gooya..." Erayadan waxaa dhowaan ku dhawaaqay Sheekh ka mid kuwa ugu sarreeya Hay'adda Culimada Soomaaliyeed. Odhaahdan nacaybka badani ka muuqdo waxaa Shiikha ka keenay kaddib markii ay tobaneeyo Masiixiyiinta Soomaaliyeed ahi ku dhiiradeen inay rumaysigooda qirtaan oo ay markhaatifurkooda soo dhigaan baraha warbaahinta. Waa marka ugu horraysee, waxaan u hambalyaynayaa Masiixiyiinta Soomaaliyeed ee sida dhiiranaanta leh u qirtay rumaysigooda, dadaalkana ugu jira inay walaalahooda Soomaaliyeed la qaybsadaan Injiilka Ciise Masiix—Warka Wanaagsan, kaas oo ku dhisan dembidhaaf, badbaado, iyo jacayl. Waxaana iyaga ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda halkaa ka sii wadaan iyaga oo xasuusanaya inay ummaddooda iftiin u yihiin, sidii uu Sa...
24 comment(s)	13535 hits	Read More
KIINEE DHAGAXA UGU HORREEYA KU TUURAYA?
Qalbi xanuun weyn baa kugu dhacaya marka aad aragtid xaqdarrooyinka badan ee bini'aadanku isku hayo, haddana kuwan qaarkood ayaa adiga si gaar ah kuu sii taabanaya, oo muddo dheer niyaddaada ka sii gubanaya, kuguna khasbaya inaad isku daydo inaad wax ka tidhaahdo, gaar ahaan marka caddaalad daradaa lagu sameeyey iyada oo magaca Ilaahay la isticmalaayo. Tusaale ahaan, waxaan aad uga gubtey dilkii foosha xumaa ee bishii Maarso 20, 2015 ka dhacay waddanka Afgaanistaan, halkaas oo boqolaal rag ahi haweeney magaceedu ahaa Farkhunda ay si axmaqnimo ah dhagax ugu dileen dabadeedna jidhkeedii gubeen, iyaga oo ku eedeynaya inay Quraan gubtey. Waxaase markii dambe la caddeeyey inay haweeneydaasi maskaxda ka jirranayd, oo 'dembiga' lagu soo eedeeyeyna uu been abuur ahaa. ...
1 comment(s)	6943 hits	Read More
"Haddii mid isu maleeyo inuu cibaado badan yahay, oo uusan afkiisa xakamayn, laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo, kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn." (Yacquub 1:26). Waxaa maalmahan aad loo hadal hayaa dhacdooyinkii ka dhacay Paris, iyo dilkii loo geystey joornaaliistayaashii Charlie Hebdo. Dhacdadani waxay tooshka ku qabatay su'aal hore u jirtey oo ah, "Ma saxsan tahay in diimaha dadka kale la aflagaadeeyo?" Anigu haddaan Masiixi ahay waxaan is weydiinayaa, "Ma saxsan tahay inay Masiixiyiintu diimaha dadka kale aflagaadeeyaan?" Jawaabta su'aashanina waa MAYA. Tan macnaheedu maaha inaan dhiirigelinayo in dad lagu dilo magaca diin la aflagaadeeyey ama Ilaahay dartii. Waxaan oggolahay in diimaha iyo sida loogu dhaqmo la baadho, su'aalo la iska weydiiyo, ...
2 comment(s)	6693 hits	Read More
Waxaa mar kale inagu soo dhow xusidii dhalashadii Sayid Ciise Masiix. Intii aan buuqa, dabaaldegyada, iyo wax iibsiga (shopping) ku mashquuli lahaa, waxaan anigu doortay inaan mar kale si sakhsiyan ah uga fekero macnaha uu wakhtigan muhiimka ahi aniga ii leeyahay. Marka aan qisadii dhalashadii Masiixa ka akhriyo Injiilka sida uu Matayos u qoray 1:18-25, laba odhaahood oo muhiim ah oo aayadahan ku jira ayaan si gaar ah ii taabanaya: "Waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii Rabbigu kaga dhex hadlay nebiga, isagoo leh, Gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxaa loo bixin doonaa, Cimmaanuu'eel; kan micnihiisu yahay, ILAAH BAA INALA JOOGA." (Matayos 1:22, 23). 1. ILAAH BAA INALA JOOGA: ma dareemeysaa inuu Ilaahay kuu dhow yahay oo kula jo...
2 comment(s)	3201 hits	Read More
Islaamku wuxuu sannadkiiba u dabaaldegaa laba ciidood oo waaweyn - Ciidul-Fidri iyo Ciidul-Adxa. Ciidul-Fidriga oo la qabto marka bisha ramadaan dhammaato, iyo Ciidul-Adxa oo ku aaddan laba bilood ramadaanka kaddib, bisha Zil-Haj, markaas oo xoolo allabari ahaan loo qalo, tan oo lagu xasuusanayo allabarigii uu Ibraahim doonayey inuu willkiisii u bixiyo. Wadaadada Muslinka ah badankoodu waxay sheegaan inaan wax xidhiidh ahi ka dhexayn allabarigan iyo dhimashadii uu Ciise iskutallaabta allabari ahaanta innaga inoogu dhintay. Haddaanu Masiixiyiin nahay waxaanu rumaysannahay in allabarigii Ibraahim lahaa waxyi ama muujin qoto dheer, oo uu tusaale u ahaa allabari ka weyn oo soo socdey. Bal aynu horta noloshii Ibraahim eegno. Wax xidhiidh ah ma ka dhexeeyaa sida Quraanka iyo Baybalku tan ugaga...
0 comment(s)	4350 hits	Read More
Get Involved / Na Caawi Today!